मृगौला किन्न नक्कली नाता | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार मृगौला किन्न नक्कली नाता
२०७६, १ कार्तिक शुक्रबार ०७:५१
मृगौला तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत एक अधिकृत, ललितपुरको पुल्चोकस्थित निदान अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सोही अस्पतालका कानुन अधिकृत, चिकित्सक र मृगौला लिने व्यक्ति गरी ५ जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले रामेछाप दोरम्बा–३ घर भई स्वयम्भू बस्ने शंकरलाल लामाले नक्कली भान्जा खडा गरी मृगौला किनेर प्रत्यारोपण गरेको घटनामा संलग्न भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निजी सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत रामचन्द्र आले, मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने निदान अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विपेन्द्र प्रधान, कानुन अधिकृत कुमुदकुमार भट्टराई, डा. राजेश पन्त र लामा छन् ।
दुवै मृगौला फेल भएपछि लामाका आफन्तले काभ्रेका ३७ वर्षीय एक युवकलाई ३ लाख रुपैयाँ दिएर मृगौला किनेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा शाखा अधिकृत रहेका बेला आलेले मृगौला प्रत्यारोपण अनुमति दिने समितिमा रहेर स्वीकृतीको हस्ताक्षर गरेका थिए । तीन महिनाअघिको यो घटनाबारे ब्युरोले दसैंअघि अनुसन्धान शुरूगरेको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अधिकृत आले बुधबार पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा रहेका अधिकृत आले घटनाको केही समयपछि मात्रै गृहमन्त्री थापाको सचिवालयमा काज सरुवा भएका थिए । गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयमा एक उपसचिवसहित दुई अधिकृत छन् । आलेले मृगौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा रहेर काम गर्दा आर्थिक लाभ लिए कि लिएनन् भन्ने खुलिसकेको छैन ।
मृगौला फेर्नैपर्ने भएपछि लामाको परिवारले रामेछापको दोरम्बा–३ को वडा कार्यालयबाट भान्जाले मृगौला दिने भन्दै नाता प्रमाणितको सिफारिस ल्याएको थियो । सिफारिसपत्रमा सक्कली भान्जाकै नाम र फोटो टाँसिएको थियो । उक्त पत्रलाई निदान अस्पतालका डा. पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधान, कानुन अधिकृत भट्टराई र जिप्रका ललितपुरका अधिकृत आलेसहितको प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले प्रमाणीकरण गर्दै प्रत्यारोपणको अनुमति दिएको थियो ।
सिफारिस पत्रमा सक्कली भान्जाको नाम र तस्बिर भए पनि मृगौला दिने बेला नक्कली व्यक्ति खडा गरिएको थियो । बिरामी लामाका छोरा र आफन्ती एक दलालमार्फत काभ्रेका युवासँग मृगौला किन्ने सहमति गरिवरि उनैलाई भान्जाका रूपमा स्वीकृति समितिसमक्ष उपस्थित गराइएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार वडाको सिफारिसपत्रमा भएको फोटोभन्दा फरक व्यक्ति उपस्थित हुँदाहुँदै स्वीकृति दिइएको थियो । जबकि उपचारमा संलग्न अस्पतालकै स्टाफ नर्सले समेत सिफारिसपत्रमा फोटोको भन्दा फरक व्यक्ति भएको बताएकी थिइन् । नक्कली भान्जाका रूपमा खडा भएको व्यक्तिले आफू फोटो खिच्दा मोटो भएको र पछि दुब्लाएको तर्क गरेका थिए भने सक्कली भान्जाको दिदीलाई समेत उपस्थित गराइएको थियो ।
भान्जा बनेर उपस्थित युवा निरक्षर रहेको र उनलाई प्रलोभनमा पारेर मृगौला दिन तयार पारिएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपालियाले बताए । उनका अनुसार घटना सार्वजनिक हुने सम्भावना भएपछि मृगौला लिएका लामाको परिवारजनले नक्कली भान्जालाई घरबाट कतै ननिस्किने गरी लुकाएर राखेका थिए । प्रहरीका अनुसार मृगौला बेचेको सात दिनपछि अस्पतालबाट निस्किएका ती युवा मदिराको अम्मली भएको र प्रत्यारोपणपछि अस्वस्थ वातावरणमा बसिरहेको पत्ता लागेको थियो ।
ब्युरोले मृगौला किनबेचमा संलग्न एक बिचौलिया पहिचान गरे पनि ती व्यक्तिलाई पक्राउ भने गरिसकेको छैन । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कानुन अधिकृत, डाक्टर र जिल्ला प्रशासनका अधिकृतसँग बिचौलियाको सम्पर्क भयो कि भएन र यो प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन भयो कि भएन भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
प्रहरीका अनुसार नक्कली दाता खडा गरी गरिएको मृगौला प्रत्यारोपणमा लामाको परिवारले करिब ११ लाख खर्चेको देखिन्छ । मृगौला किन्न भने तीन लाख रुपैयाँ बैंक खातामा राखिदिएको र पछि केही पैसा थपिदिने प्रलोभन दिएको पाइएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका पाँचै जनाविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Previous articleनयाँ सभामुखका लागि गृहकार्य सुरु
Next articleमानसिक रोगका कारण र लक्षण-जानिराखौं